Hormuud oo $100 kun u qeybisay carruur agoon ah – Radio Muqdisho
Hormuud oo $100 kun u qeybisay carruur agoon ah
Lacagtaan deeqda ah ee maanta ay hey’ada samafalka Hormuud Foundation u qaybisay caruurta agoonta ah ee magaalada Muqdisho ku nool qaarkood ayaa waxaa ay gaareysaa 100 kun oo dolar waxaana ay qayb ka tahay deeqaha lacagta iyo raashinka isugu jira ee Hormuud ay dhawaanahaanba ku afurineysay dadka danyarta ah.
Kulanka lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay maamulayaasha ilaa 18 hay’adood oo iyagu xanaaneeya caruurta agoonta waxaana mas’uuliyiinta hormuud Foundation ay kala hadleen maaamulayaasha sida loo gaarsiin karo lacagtaas caruurta agoonta ah.
Qaar ka mid ah maamulayaasha ayaa waxaa ay ka mahad celiyeen taakuleynta Hormuud ee caruurta agoonta.
“In waxeeda aan gaarsiineyno dadkii aad ugu talo gasheen aan gaarsiineyno waa balan qaad anaga ayay na dul saran tahay insha’alaahu tacaalaa Hay’ada waxaan u rajeyneynaa kheyr badan ”ayay sheegeen.
“Waxaan idin leeyahay horta hore jasada ilaahaa bixiya ilaahaybaan horta idiin weydiineynaa in uu abaal marin idinka siiyo barnaamijkaan aad maanta bilawdeen oo aad dhahdeen mu’asasadaa wax ugu dhiibeynaa waa fikir aad u wanaagsan runtii marka la yiraahdo sababta dadkani waa dadkii gacanta ku hayay”.
Maamulaha hay’ada Hormuud Foundation Muuse Axmed Nuur oo gaba gabadii ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay in arinkaan ay ku taakuleynayaan agoonta Soomaaliyeed uu qayb ka yahay barnaamijyada bisha barakeysan ee Ramadaan ay shirkadu ku caawineyso dadka danyarta ah.
“Duca iyo amaanba adinkaa mudan adinkaa hayay cidaan wax siino ma aragneen hadaadnaan meel ku hayn lahayn sababtoo ah suura galba maahan agoon banana marayay in si wax loo siiyo malahan ama nidaam wax lagu siiyaa waa adkaanaa ama wixii yaraayoo aad haysay si wax loogu nidaamiyaa waa adkaanee in aad meel ku haysaan oo aad mas’uul u tihiinbaa micno badan sameyneysa waxaan halkaa idin gudoonsiin doonaa halkaa 18 kaas hay’adood oo agoomaha haya lacag 100 kun ah in sha alaah oon idiin kala qaybin doono hadii alle yiraah”, ayuu yiri Axmed.
Wasaaradda Caafimaadka oo deeq dawo ah gaarsiisay Isbitalka dhexe ee Cadaado-Sawirro